Jabbuuti oo waa qaab web video caadi ahaan loo isticmaalo. Diinta MP4 in ay Jabbuuti waa fikrad wanaagsan in geliyaan MP4 videos si aad u blog-gaaga ama bogagga internetka iwm Marka la barbar dhigo Jabbuuti, MP4 ma aha qaab fiican inaad la wadaagto videos. Iyo Jabbuuti oo waa qaab la door bidaayo in uu sameeyo shaqadan ay sabab u tahay baaxadda yar oo tayo weyn oo ay ku geliyaan videos boggaga internetka. Haddii aad u baahan tahay si loogu badalo MP4 in ay Jabbuuti oo ujeedadaas, aad leedahay si aad u hesho a MP4 video smart in ay Jabbuuti video Converter caawimaad.
Qeybta 1: Best MP4 in ay Jabbuuti Video Converter
Qeybta 2: MP4 Free in ay Jabbuuti oo Converter
Qeybta 3: MP4 Online in ay Jabbuuti oo Converter
Qeybta 1: Best MP4 in ay Jabbuuti Video Converter for Windows / Mac (El Capitan ka mid ah)
• Beddelaan MP4 si Jabbuuti, AVI, MKV, MOV iyo video dheeraad ah oo caan ah iyo qaabab audio.
• filaayo in presets u si fudud Radidiyaha on telefoonada gacanta, Windows ama Mac.
• Gubashada MP4 DVD in la arrimo badan oo la dhisay-in, riyaaqayaa videos on shaashad weyn.
• In kor loo qaado si aad video by falinjeeerka, lana siii, isagoo intaa ku daray saamaynta ama qabsato nuur iyo saturation, iwm
• Download videos ka goobaha video qaybsiga (YouTube & Dailymotion ka mid ah) ee 30X xawaaraha ugu dhaqsiyaha badan.
Sida loo Beddelaan MP4 si Jabbuuti oo la Wondershare Video Converter
Hel hoos ku hago ku saabsan sida loo badalo MP4 in ay Jabbuuti oo u Windows (Windows 10 ka mid ah). Haddii aad tahay user Mac ah, guji halkan ku gartaan si loo badalo MP4 in ay Jabbuuti ku Mac (Yosemite ka mid ah).
Tallaabada 1 dar videos MP4 in MP4 in ay Converter Jabbuuti
Jiid file MP4 in barnaamijkan, ama guji badhanka on interface ugu weyn. Markaas, suuqa kala pop-up la ogolaan doonaa in aad dhirtuba aad files hoose iyo dooran files MP4 aad rabto in aad keeno.
Wakhtigan, aad (optional) iyaga ku eegaan kartaa adigoo gujinaya thumbnail video ah, sax ah "midowdo oo dhan videos galay mid ka mid file" si ay u midowdo galay mid ka mid file haddii u baahan, ama dib-u-diyaarin si ay u beddel muhiimadda diinta iwm
Tallaabada 2 Dooro Jabbuuti oo sida qaab wax soo saarka
Hit ah "Qaabka" image icon dhinaca midig si uu u furo liiska qaabka wax soo saarka. Waxaad arki doonaa si dhan qaabab loo jecel yahay waxaa lagu kala soocaa galay qaybaha kala duwan. Just guji category Qaabka, ka dibna tag "Web" subcategory si ay u doortaan "Jabbuuti oo" qaab sida qaabka outpupt.
Fiiro gaar ah: Waxaad si toos ah waxaa ku dhacay kartaa "Open Folder" badhanka si aad u ogaato faylasha wax soo saarka si fudud oo dhaqso.
Tallaabada 3 Customize MP4 videos (Ikhtiyaar)
Midig u guji video clip aad rabto in aad wax ka beddelo oo markaas dooran "Video Edit" si ay u helaan suuqa kala edit ah. Halkan, hawlaha tafatirka caadiga ah la siiyaa:
• kala videos: . Sida uu "Edit" submenu, waxaa jira fursad u kala bixiyo, haddii aad rabto in aan kala tagno ah files MP4 dheer dhowr clips • Dalag: astaysto size qaab dhismeedka (16: 9, 4: 3 iwm) oo ka gooyay madow . xadad of videos ah • Saamaynta: Calan nuurka, bedelkeeda, Saturation, kordhiyo of video iyo codsan Hababka saameyn kala duwan (Gray, Emboss, xun, iwm). • Watermark: . Ku dar image ama watermark qoraalka si video MP4 ah • subtitles : In loo sahlo subtitles fur-in ama subtitles kartoo.
Tallaabada 4 Start MP4 inay diinta ka Jabbuuti
Si fudud ku dhacay "Beddelaan" doorasho ee geeska midig hoose oo ka mid ah barnaamijka 's interface ugu weyn ee ay u badalaan MP4 in ay Jabbuuti. Markaas, kaliya waxa maamula ee asalka ah. App Tani si dhakhso ah ku dhameysan doona hawsha. Marka lagu sameeyey, waxaa jiri doona note pop-up aad keentay in dhammaan howlaha la soo dhameystay.
Video Tutorial: Sida loo Beddelaan MP4 in ay Jabbuuti oo u Windows (Windows 10 ka mid ah)
Qeybta 2: Free MP4 in ay Jabbuuti oo Converter
# 1. Free Video Converter: Wondershare MP4 Free in ay Jabbuuti oo Converter
Tani MP4 FREE in Converter Jabbuuti oo aad ogolaanaysaa MP4 diinta si xor ah u Jabbuuti, xaalkaa videos download iyo YouTube videos xawaare degdeg ah.
Pro: freeware, wax kharash dheeraad ah
1. Waxa kaliya ee ay taageertaa diinta files warbaahinta si caadi ah videos (Jabbuuti oo ka mid ah), halka Video Converter Ultimate sidoo kale ha kartaa in aad loogu badalo in ay 3D iyo HD videos.
2. Waxaad u isticmaali kartaa si toos ah loogu badalo qalabka sida telefoonada iPhone, iPad, Samsung.
3. Tayada video saarka wuxuu u baahan yahay in la hagaajiyo.
Raadinta nadiif ah, awood iyo xirfad video Converter in la isticmaalo? Waxaan ku talinaynaa in Video Converter Ultimate halkan. Waxaa oo dhan-in-mid video qalabka diinta adiga kuu wanaagsan.
Sida loo Beddelaan Canon MTS M2TS Files
Sida loo Beddelaan Sony MTS M2TS Files
> Resource > Beddelaan > Sida loo Beddelaan MP4 in ay Jabbuuti